BIZARRE | Tourism of Nepal
Home » BIZARRE You are browsing entries filed in “BIZARRE”
१० महिनामै २० किलो
कोलम्बियाको लिबानो सहरमा १० महिनाका एक बालिका छिन्, जसको नाम जुआक्न्निता वेलेन्टिना हो । तर, उनलाई देख्ने कसैले पनि उनी १० महिनाकी हुन् भनेर पत्याउँदैनन् । किनकि उनी ज्यादै मोटी छिन् । यति कलिलो उमेरमै उनको शरीरको वजन २० किलो छ । प्रायः पाँच वर्षका बालबालिका मात्रै यति तौलका हुन्छन् । यी बालिका जन्मँदैखेरि २.७ […]
Posted in BIZARRE | Read More »
कुकुरसँग प्याराजम्प !
रमाइलोका लागि जोखिमपूर्ण काम गर्ने मानिसको कमी संसारमा छैन । मनोरञ्जन लिन अग्लो भवनबाट फाल हान्ने, अग्लो भवनलाई टेको बनाएर बाँधिएको डोरीमा हिँड्ने गरेको देखिँदै अथवा सुनिँदै आएको छ । स्पेनिस आर्मीका दुई जवान यस्तै एडभेन्चर लभर छन् । तालिमका क्रममा साहसीपूर्ण काम गर्न उनीहरू असाध्यै रुचाउँछन् । ती जवानले विमानबाट कुकुरसहित फाल हानेर साहस […]
घामले पग्लन्छ, जहाँका बासिन्दाको छाला
जाडोका कारण अहिले घाम निकै प्यारो लाग्छ । कतिलाई त लाग्छ, गर्मी कहिले लाग्ला ? तर, संसारमा त्यस्तो ठाउँ पनि छ, जहाँ मानिस गर्मीबाट तर्सिन्छन् । त्यो गाउँ हो, ब्राजिलको साओ पाउलोनजिकैको अरारस गाउँ । यहाँका मानिस गर्मीबाट तर्सन्छन्, कारण हो गर्मीले उनीहरूको छाला गल्न थाल्छ । उक्त गाउँ अचम्म–अचम्मका बिरामीबाट ग्रसित गाउँको रूपमा परिचित […]
यो पहाडले रंग फेर्छ !
प्रकृतिका अनेकौं रुपहरु हुन्छन् । तिनै रुपले प्रकृतिलाई सम्पन्न गराएका हुन्छन् । हामी छेपाराले रंग परिवर्तन गरेको त देखेका छौ, सुनेका छौ, तर, पहाडले रंग परिवर्तन गरेको सुन्दा भने हामी अचम्मित पर्नसक्छौं । तर यो सत्य हो । यस्तो पहाड आइसल्यान्डमा छ । आइसल्यान्डको फजलाबक नेचर रिजर्बमा यस्तै एउटा पहाड छ । यसले मौसमअनुसार आफ्नो रङ […]
३४ वर्ष लगाएर सुरुङ निर्माण !
कुनै–कुनै मानिसको रुचि पनि अचम्मको हुन्छ । अमेरिकी राज्य क्यालिफोर्नियामा हेनरी नाम गरेका एकजना यस्तै अजिब मानिस थिए । उनले क्यालिफोर्नियाको केमोजावे मरुभूमिमा ३४ वर्ष लगाएर दुई हजार ८७ फिट लामो सुरुङ बनाएका थिए । यद्यपि, उनले यत्रो अथाह मिहिनेत गरेर सुरुङ किन बनाएका थिए भन्ने अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन । हेनरीले सन् १९०२ मा […]
ओहो ! कति ठूलो फर्सी
अमेरिका सनफ्रान्सिस्को सहरमा हरेक वर्ष फर्सी प्रतियोगिता हुँदै आएकामा यस वर्ष कृषक जोन हक्लेको फर्सीले विश्वकै ठूलो फर्सीको ताज पहिरिएको छ । जोनको बारीमा फलेको नौ सय ३३ किलो वजन भएको फर्सीले संसारकै ठूलो फर्सीको उपाधि पाएको हो । ‘सेफवे वल्र्ड च्याम्पियनसिप वे–अफ’को ब्यानरमा हरेक वर्ष सनफ्रान्सिस्कोमा फर्सी प्रतियोगिता हुने गरेको छ । यसपालि […]
अब बाँदर पनि फेसबुकको फिदा !
आजकल जो कोही फेसबुक भनेपछि हुरुक्क हुन्छन । फेसबुक एकछिन चलाउन नपाए तपाईंलाई कस्तो कस्तो वेचैन अनुभव हुन्छ । एकप्रकारको एडिक्सन नै भैसकेको छ फेसबुक सूचना प्रविधिसँग नजिकएको जो कसैका लागि । तर, बादर पनि फेसबुके फिदा भएको सुन्दा भने एकपटक अमम्मै हुनुपर्ला । यो फोटो देखेर अब भने अचम्म नपर्नुहोस अचम्ममा नपर्नुहोस् । सम्झनुहोस्– एउटा बाँदर […]
जमिनबाट ४५० फुट माथि अनौठो रोमाञ्चक हट पार्टी
मानिसका सोख पनि अनौठा अनौठा हुन्छन्, रोमाञ्चक जिन्दगीमा रमाउन चाहन मानिसका लागि सहासिक खेलहरु सामान्य भैसकेका छन् । हाम्रै देशमा पनि बञ्जि जम्पिङ, क्यानोनिङ, प्याराग्लाईडिङ जस्ता सहासिक खेलहरुले विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटककको मन जितिसकेका छन् । त्यसो त सहासिक खेलका लागि नेपाल उर्वरा भूमि समेत पनि त हो, खाली सहासिक खेलका लागि स्थान छनौट र […]
जब ट्विटरमा हुनेछ परीक्षाको तयारी
स्कुले शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ ? हामीले कस्तो प्रकारको स्कुले प्रणालीको विकास गर्दैछौं ? एकपटक तपाईं हामी गम्भीर भएर सोचौं त ? स्कुलका लागि चाहिने अतिआवश्यक भौतिक सामाग्रीको अभावमा हाम्रा स्कुलहरु दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दैछन् । भवन नभएर खुल्ला चौरमा पढ्न बाध्य छन् हाम्रा नानीहरु । स्कुले शिक्षा दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको छ । शिक्षामा धनी र गरीबबीचको […]
पेरिस । स्पेनी अनुसन्धानकर्ताहरूले विभिन्न बियरको प्रकार र तीनमा रहेका मदिराको मात्रा मापन गर्ने इलेक्ट्रोनिक जिब्रो विकास गरेका छन् । यसका सिर्जनाकारहरूले यो कृत्रिम जिब्रोले हाल ८२ प्रतिशत सही कार्य गर्नसक्ने बताएका छन् । यसलाई स्वाद पत्ता लगाउने रोबोट सिर्जना गर्ने कार्यमा पहिलो पाइलाको रूपमा हेरिएको छ । यस जिब्रोमा २१ वटा इलेक्ट्रोड रहेका छन् […]